समाचार - तपाईंको कार हेड इकाई र स्टेरियो प्रणालीहरू बुझ्नको लागि आधारभूत कुराहरू
कार मनोरन्जन 1930s पछि सबैभन्दा प्रसिद्ध कार्य भएको छ। विभिन्न कार डिजाइनहरूको विकासको साथ यसले कार मनोरन्जन प्रणालीहरूको विकासको नेतृत्व गर्‍यो। आज धेरै प्रणालीहरूले अडियो उपकरणहरूबाट SD कार्डहरू र USB केबलहरूको रूपमा तपाईंको कार भित्रबाट संगीत बजाउन सक्छन्, यो अचम्मको होइन! स्टेरियो प्रणाली र हेड एकाइहरूको भारी छनोटहरूले कसैलाई भ्रमित गर्न सक्छ। जाँच गर्नुहोस्होन्डा सिभिक स्टेरियो एकाइहरूजुन हामीसँग छ। तपाईको कारको लागि उत्तम के हो भनेर बुझ्दा तपाईलाई ठूलो सम्झौता गर्न सक्छ।
एन्ड्रोइडमा आधारित हेड इकाइहरू आजका दिन लोकप्रिय भइरहेका छन्, केही महँगो टच स्क्रिन हेड एकाइहरू र केही सरल र सस्तो हेड एकाइहरू जस्तै देखिन्छन्। हामीले जारी राख्नु अघि तपाईले हेड युनिट जाँच खोज्दै हुनुहुन्छ भनेसुबारु WRX STi एन्ड्रोइड एकाइहरूजुन हामीसँग छ र हाम्रो अनन्त सेवाहरूको आनन्द लिन्छौं। एन्ड्रोइड अटो हुनु भनेको तपाईको एन्ड्रोइड उपकरणलाई तपाईको सुबारु हेड युनिटमा जडान गर्ने उत्तम तरिका हो। एन्ड्रोइड युनिटले कसरी काम गर्छ? एन्ड्रोइड अटो एप्लिकेसनले तपाईको कारको हेड युनिट डिस्प्लेलाई तपाईको फोनको स्क्रिनको परिमार्जित संस्करणमा परिणत गरेर काम गर्दछ जसले तपाईलाई तपाईको फोन नहेरी संगीत बजाउन र फोनका अन्य चीजहरू गर्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरू किन लोकप्रिय छन्? यसको लागि उत्तम जवाफ सरल छ, तिनीहरू कुनै पनि एन्ड्रोइड उपकरणसँग उपयुक्त छन्।
जबकि त्यहाँ यसको लोकप्रियता को लागी अन्य आश्चर्यजनक कारणहरु छन्, एन्ड्रोइड एकाइहरु अद्भुत नेभिगेसन प्रणाली छ। नेभिगेटिङ प्रणालीमा भित्र-निर्मित GPS छ जुन धेरै भरपर्दो र एन्ड्रोइड गुगल नक्सासँग Google सहायक मार्फत अद्भुत भ्वाइस कमाण्डको साथ मिल्दोजुल्दो छ, जसले तपाईंलाई नेभिगेट गर्दा यसलाई अद्भुत उपकरण बनाउन मद्दत गर्न सक्छ।
आफ्नो कार हेड युनिट र स्टेरियो प्रणाली बुझेपछि, जाँच गर्नुहोस् नागरिक स्टेरियो एकाइहरूहामी प्रस्ताव गर्छौं र तपाइँको खरिद गर्छौं। हेरचाह तपाइँको टाउको एकाइहरु को उपयोग को लम्बाइ को लागी अभ्यास गरिनु पर्छ। आफ्नो कारलाई ओभरराइड नगर्नुहोस्, विकृति भन्दा स्पिकर र एम्पलीफायरलाई मार्दैन, तपाईंले आफ्नो हेड युनिटको पावर जडानहरू जाँच गरिरहनुभएको छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस् र अन्तमा प्रत्यक्ष प्रभावहरू रोक्न अतिरिक्त केसिङ थपेर आफ्नो स्पिकरहरूलाई सुरक्षित गर्नुहोस्। तपाईंको कारको हेड युनिट र स्टेरियो प्रणालीहरूको लामो समयसम्म प्रयोग गरी ती सावधानीहरू अभ्यास गर्दै।